Antananarivo : haverina ny fitakiana ny sarana fametrahana pylône (NewsMada) | AEMW
Antananarivo : haverina ny fitakiana ny sarana fametrahana pylône (NewsMada)
Anisan’ny lany tao anivon’ny filankevitry ny tanànan’Antananarivo omaly, fa nofoanana ny fanapahana tamin’ny volana marsa 2014 tsy ahafahana maka sarany amin’ireo pylône sy ny “antenne relais” eto amin’ny tanànan’Antananarivo.
Noho izany manomboka izao, ho afaka maka sara amin’ireo pylône sy « antenne relais” eto an-dRenivohitra ireo ny fiadidiana ny Tanàna. Anisan’ny nandraisana fanapahana tao amin’ny fivoriana tsy ara-potoanan’ny filankevitry ny Tanànan’Antananarivo izany.
Betsaka ireo pylône an’ny orinasan’ny tambajotran-tserasera mipetraka etsy sy eroa. Saika ahitana azy ireo ny trano avo eto an-dRenivohitra. Efa misy ny fepetra iarahan’ny orinasa tompon’izy ireny amin’ny tompon’ny trano ametrahana azy.
Misy koa ny vola alain’ny kaominina izany manomboka izao amin’izy ireny ka mila miomana amin’izany ireo orinasa.
Tapaka nandritra izao fivoriana tsy ara-potoana nandritra izao koa fa hisy fanamboarana ny hetra alaina amin’ireo karazana dokam-barotra samy hafa eto an-dRenivohitra. Ny hetra alaina amin’izao fotoana izao amin’ireo karazana dokambarotra ireo dia efa tamin’ny taona 1994. Mpanolotsaina 42 no nandany ireo lahadinika roa ireo androany tao amin’ny lapan’ny Tanànan’Analakely, mpanolotsaina 1 kosa no nitsipaka.
Anisan’ny resaka samihafa nandritra izao fivoriana tsy ara-potoana izao koa ny resaka fandaminanana ny tsena eto Antananarivo. Fantatra fa miara-miasa amin’ny kaominina amin’ny fanohizana izany fandaminana ny tsena izany ny polisy monisipaly, ny polisim-pirenena ary ny prefektoran’Antananarivo.
← Ho avy ny maintany : vao mainka ho sahirana ny Jirama (NewsMada)
“Foire d’Ylang” – Mpandraharaha vehivavy : fifanakalozana tamin’ireo Maorisianina sy Aostralianina (NewsMada) →